Ahoana ny mifidy masoandro eny an-dalana jiro fampiharana toerana - Yangzhou Langxu Lighting teknolojia Co., Ltd.
Ny jiro an-dalambe solar dia manana anjara toerana lehibe amin'ny famatsiana herinaratra ao an-toerana, ka betsaka ny milaza fa azo atao ny mampiasa jiro an-dalambe any amin'ny toerana sasany amin'ny tontolo iainana. Nefa azo ampiasaina amin'ny toerana ratsy ve ny jiro an-dalambe maivana? Satria tsy ny toerana rehetra no tsara kokoa, fa te hahafantatra avy amin'ny lafiny sasany, na dia ratsy aza ny tontolo iainana, dia mbola afaka mampiasa azy io.
Voalohany indrindra dia tena tsara ny fanoherany ny rivotra, avelao ho fantatrareo fa mbola misy faritra maro, tena tsara ny hafainganam-pandehany. Ka raha tsy misy tranobe ankapobeny manohitra ny fanoherana ny rivotra, dia hisy fiantraikany lehibe amin'ny heriny, ary hoy aza izy fa eo ambanin'ny fitsokan'ny fotoana lava dia hahasimba be dia be izany, fa ho an'ny jiro andrefana kosa tsy mitovy, satria eo am-piandohan'ny mpanamboatra azy dia heverina ao amin'ny drafitra famolavolana dia hampiasaina amin'ny rivotra lehibe kokoa, koa avelao ny fanoherana ny rivotra koa dia mahery. Amin'ity tranga ity, raha mieritreritra izany ianao, ny jiro an-dalambe solar dia mety miasa araka ny tokony ho izy ireo rehefa ampiasaina amin'ny toerana sasany miaraka amin'ny fomba mahazatra izy ireo.
Moa ve ny mari-pandrefesana ny fiovaovan'ny tontolo iainana, satria tsy mitovy ny mari-pana amin'ny faritra samihafa eto amin'ny firenena, ary tsy mitovy ny mari-pana eo amin'ny andro sy ny alina, raha misafidy karazana jiro eny an-dalambe ianao dia afaka fampiasana amin'ny toe-javatra mahazatra amin'ny mari-pana, fa amin'ny mari-pana mafana kokoa, lehibe kokoa, na tsy afaka mampiasa azy ny hatsiaka, dia ny herin'ny arabe amin'ny ain'ny olon-drehetra dia tsy mahery. Fa raha fantatrao tsara ny lalan'ny tavy, fantatrao fa matanjaka ny mari-pana ambiny ary afaka mampifanaraka amin'ny fepetra tafahoatra. Ka amin'io lafiny io, na dia mampiasa jiro an-dalambe aza ianao amin'ny toerana sasany manana mari-pana ratsy, dia mbola azonao atao ny mametraka azy ireo ny anjara toerany tany am-boalohany, mba hahafahanao mahafantatra fa afaka mampifanaraka ny tontolo henjana izy ireo.
, mazava ho azy, ankoatry ny lafiny roa ireo, ary koa ny fanoheran'ny vovoka mahery vaika, satria mbola maro ny toerana, indraindray hisy horohoron-tany, nisy horohoron-tany azo antoka fa afaka mamokatra ny sasany amin'ireo jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro ihany koa. ka misy olona sahiran-tsaina amin'ny fahaizany manohitra horohoron-tany dia tsy matanjaka, fa toy ny jiro an-dalambe ankehitriny, ny fanoherany ny horohorontany amin'ny herinaratra 8. Avy eo hahafantatra isika fa rehefa misafidy jiro an-dalambe isika, dia azo ampiasaina amin'ny tontolo ratsy sasany.
Koa avy amin'ny zavatra voalaza etsy ambony dia afaka mijery ny antony marobe bebe kokoa afaka mametraka jiro an-dalambe masoandro, satria tena fantatr'izy ireo taorian'ny fametrahana ny jiro aretin'ny masoandro, afaka mitondra amin'ny fiverenam-bidy tena tsara izy io, ary mamokatra ihany koa ny tombony. marina tanteraka noho ny jiro hafa vokarina amin'ny fizarana fampiasana fahombiazana dia tsara kokoa. Amin'izany fomba izany, na amin'ny tontolo iainana na amin'ny tontolo ratsy dia mety tsara ny fametrahana jiro aretin'ny masoandro, ary afaka mamonjy vola bebe kokoa ho an'ny olona rehetra izany.